UFernando Suárez Reguera kunye nemifanekiso yakhe eqingqiweyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sisandul 'ukutyelela yintoni eyimfakamfele ukuphinda wenze izilwanyana ezahlukeneyo, kwaye ugqithe ngomsebenzi kaFernando Suárez Reguera, apho unakho fumana izilwanyana kunye nabantuUkutyunjwa kwenziwa njengogqibeleleyo ukulandela loo ndlela ishiywe ngaphambili.
Suárez kusibuyisela ubungangamsha zezilwanyana ezithile zomfuziselo ezifana nendlovu uqobo kwaye zisivumela ukuba siphinde sizihlaziye ngomzimba womntu kwizinto ezithile ezintle kakhulu. Ingqokelela yakhe yemifanekiso eqingqiweyo iphinde yenziwa ngendlela ekhethekileyo ngentsimbi kunye necorten yinyani.
Njengokuba yayingamanani Idityaniswe ngendlela engaqhelekanga kolo khangelo lokwenza uburhabaxa kunye neziqwengana ezinde ezenza indlebe enkulu yendlovu okanye ezo zibhityileyo ukusithathela kulwakhiwo lwamabamba amakhulu.
Un Umculi we-Oviedo ohlala eMadrid Kwaye ubonakalisile kwihlabathi liphela ngokujonga okukhethekileyo kumfanekiso oqingqiweyo. Amanye amanani amele ngentsimbi, i-corten yentsimbi kwaye amanye ane-resin. Ngonyango olugqibeleleyo ukubonisa ubukhulu bezinto eziphilayo, nangona isebenzisa isinyithi njengohlobo lwentetho.
Kufanelekile ukuba ukhankanye, kwaye ukulandela umzila oshiywe ngabanye amagcisa afunyenwe kwiiveki ezidlulileyo, ingwane okanye ixhalanga zizinto ezithile ezenziwe ngokukhethekileyo. Umzobi onephothifoliyo enkulu njengoko unokufumana kwiwebhusayithi yakhe kwaye apho unokufumana khona zonke iintlobo zensimbi. Umkroli weplastikhi kubugcisa nalapho umsebenzi wakhe usondela ekudalweni kwezakhiwo ezingenakulindeleka ezifana nezinye ezinje nge "organic bridge" apho ibhulorho ineziseko zayo ezendele ngokungathi ziingcambu zomthi.
Unayo Nantsi iwebhusayithi yakho ukumfumanisa kunye landela nayiphi na imiboniso yabo nemisebenzi evela I-instagram yakhe o facebook wakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imifanekiso eqingqiweyo engakholelekiyo kaFernando Suárez Reguera
Igcisa lisebenzisa iziyobisi ezingama-20 ezahlukeneyo kwaye lenze imisebenzi engama-20 ukubonisa iziphumo zazo